Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Key West dia manafoana ny diabe 2021 Fantasy Fest Parade
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • culinary • Kolontsaina • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny hetsika sonia toy ny Headdress Ball sy Pet Masquerade dia mbola kasaina ihany, ary hisy fety masquerade tsirairay sy ireo ankafizin'ny festival hafa ankafizinao.
Nofoanana ny hetsika malaza Key West noho ny valanaretina COVID-19.
Hetsika maro amin'ny fetibe voalahatra no hitohy miaraka amin'ny protokol fiarovana COVID-19.
Ny Masquerade malaza koa dia mijanona ankehitriny.
Tsy hatao amin'ity taona ity ny diabe fampandrenesana fanta-daikan'i Key West an'i Big West ary fampirantiana an-dalambe ao amin'ny Duval Street, hoy ny mpikarakara ny festival 10 amin'ny fanaovana masking sy costume, ny alatsinainy alina teo, mba hiarovana amin'ny mety ho fiparitahan'ny COVID-19 sy ny karazany hafa.
Notsindrian'izy ireo ny fetin'ny 22-31 Oktobra amin'ny ankapobeny ary hitohy ny hetsika maro voalahatra, ary mandrisika ny mpanatrika hanaraka ny kaonferansa fiarovana COVID.
"Hiavaka amin'ny endrika hafa ny Fantasy Fest amin'ity taona ity, saingy tsy foanana izany", hoy ny talen'ny festival Nadene Grossman Orr. "Ny hetsika sonia toy ny Headdress Ball sy Pet Masquerade dia mbola kasaina ihany, ary hisy fety misaron-tava tsirairay sy ireo ankafizin'ny festival hafa ankafizintsika."
Grossman Orr dia nilaza fa ny martsa Masquerade malaza, kasaina hatao amin'ny 29 Oktobra, dia mijanona ankehitriny.
Samy mitaona olona an'arivony maro ny diabe misongadina sy ny foara arabe Key WestTanàn-dehibe manan-tantara.
Ireo mpikarakara ny Zombie Bike Ride sy ny fampielezan-kevitra amin'ny fanangonana vola ho fisafidianana ny mpanjaka sy ny mpanjakavavy festival dia nanafoana ny hetsika nataon'izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, noho ny ahiahiny momba ny COVID.
Fantasy Fest dia naorina tamin'ny 1979 ary nahazo fankasitrahana iraisam-pirenena noho ny fifaninanana, fitsangantsanganana filomanosana mihaja ary fety fanaovana akanjo misy lohahevitra.
Grossman Orr dia nilaza fa tokony havaozina ireo fandaharam-potoana amin'ny andro ho avy ary nanentana ny olona hijery izany matetika.